Android 6.0.1 & apos; sukuphazamisa de inqaku elilandelayo le-alamu liphele
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 6.0.1 'Musa ukuphazamisa kude kube yinto elandelayo yealam'
Sukuphazamisa de i-alamu elandelayo ibuye nge-Android 6.0.1, kodwa ihambile kwakhona Abo bashukumisela ifowuni enikwe amandla yi-Android 6.0.1 banokufumanisa namhlanje ukuba inqaku elithile lisusiwe kwakhona. 'Ungaphazamisi kude kube kuseto lwe-alamu elandelayo ebuyiselwe kuGoogle kunye neapos yomthombo ovulekileyo OS kunye nohlaziyo lwe-6.0.1, ihambile. Inqaku, eliqinisekisa ukuba abasebenzisi be-Android abaguqula ivolumu yabo basazisiwe ngexesha elikhethwe kwangaphambili, liphinde lasuswa eqongeni.
Eli lixesha lesibini ukuba amandla-abekho kuGoogle alususe olu khetho. Ixesha lokuqala lalinokuhlaziya kwe-Android 6.0. Isizathu sokuba iyafuneka konke konke inento yokwenza nendlela i-Android etshintsha ngayo ifowuni. Endaweni yokuguqula nje isilayidi sevolumu siye '0,' i-Android ibonelela ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Unokukhetha ukufumana zonke izaziso, kuphela izaziso ezinethegi ephambili (kubandakanya iialamu), kwaye akukho zaziso kwaphela. Into ethi 'Musa ukuphazamisa kude kube yinto elandelayo yealam' evumela ukuseta ii-alamu ukuba zihambe nokuba zizaziso ezithulisiweyo. Nje ukuba ialam ikhale, izaziso ziyabuyiselwa ngokuzenzekelayo.
Abo bathumela malunga noku kumajelo asekuhlaleni babonakala bekholelwa ukuba uGoogle uneUmsebenzi ongenokwenzekaI-Snapchat-esque self destruct feature, eyilelwe ukususa useto kule mpelaveki. Kuhlala kukho ukhetho oluya kuvumela i-alamu emiselweyo ukuba icime kangangexesha elithile, nokuba zonke izaziso zimisiwe. Kodwa le ayizukuphendulela izicwangciso kwakhona.
Ngaba uGoogle unalo ixesha lokuzibhubhisa eliyimfihlo kwezinye izinto ze-Android 6.0.1?
Ungaziskena njani iikhowudi zeQR kunye neebakhowudi kwi-iPhone nakwi-Android
I-Android ekugqibeleni ijongana nobungozi bebhodi eqhotyoshwayo, emva kweApple
Uyihlaziya njani i-AT & T yakho ye-Samsung Focus S kwiWindows Phone Tango
IMicrosoft kunye neAmazon bajoyina amandla ukuzisa iiapps ze-Android kwiPC yakho ngeWindows 11
I-Motorola P4000 yePacker Power Pack ephathwayo
Idili: Gcina ukuya kuthi ga kwi-150 yeedola kwi-iPhone X (Verizon, AT & T)
Ndiyathemba ukuba ii-apos azikashiywa lixesha ukunqanda ukufaka i-watchOS 7 kuthotho lwakho lwe-Apple Watch
Imidlalo yokudubula esebenzisa i-iPhone kunye neapos ye-3D Bamba ngokugqibeleleyo